Ndị ọzọ Factlọ ọrụ, ndị na - eweta ngwaahịa - China ndị ọzọ na-emepụta
Flake akụrụngwa igwe
Igwe mmiri flake ice igwe
Igwe akpụrụ tube
Ndị na-eme ice na-ere ahịa
Igwe igwe slurry
Gbochie igwe akpụrụ mmiri
Bọọlụ akpụ akpụ
Cube ice ebu
Okpokoro isi akpụ akpụ
Onye na-eme ihe ubi
Igwe mkpọ ice
Ime ụlọ ice
Flake ice na-ekpo ọkụ
Gbochie igwe akpụrụ
Igwe igwe ice 20T
10T tube igwe akpụrụ
5T tube igwe akpụrụ mmiri
3T tube igwe akpụrụ mmiri
Nkọwapụta Ngwaahịa: Maka ndị na-ere igwe akụrụngwa na ndị ahịa nwere ike iji ice na-eme ihe n'oge ọ bụla n'ehihie, ọ dịghị mkpa ka ha weta sistemụ friji maka ụlọ nchekwa ice ha. Maka nnukwu ụlọ nchekwa ice, achọrọ nkeji friji ka ọ dịrị n'ime mwepu bekee ka ice wee nwee ike idowe n'ime ya n'ebughị ụzọ gbazee Ice ụlọ na-eji maka ichebe flake ice, ngọngọ ice, bagged ice akpa na na. Atụmatụ: 1. Oyi nchekwa board mkpuchi ọkpụrụkpụ ...
Nkọwa ngwaahịa: Igwe na-etinye ice ice na-agụnye akụkụ atọ: iri nri, na-eri nri, na-agbakọ. Single dynamo ọkọnọ ike, ịghasa erute ice. Anyị raara onwe anyị nye inye gị igwe dị mfe, ntụkwasị obi, akụ na ụba. Atụmatụ: Ọdịdị dị mfe, ịdị arọ dị mfe, njem dị mfe. Igwe anaghị agba nchara 304 kpuchitere ihu niile, na-agbaso ụkpụrụ ịdị ọcha nri. Nhazi sistemụ niile na-eji akara ama ama.
Nkọwapụta Ngwaahịa: Herbin na-enye akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa maka ikpochapu ice, tubes ice, wdg. A na-egweri Ice n’ime obere iberibe ma ọ bụ ọbụna ntụ ntụ. Ice a gbajiri agbaji nwere ike izute usoro nri dị ọcha ma ọ bụrụ na ndị ahịa chọrọ ya. Atụmatụ: A na-eji efere ígwè na igwe anaghị agba sheel ahụ, iji hụ ọmarịcha na ọdịdị mara mma. Modular imewe na-eme ka ọ dị mfe na mma na-arụ ọrụ. Elu arụmọrụ na ogologo ọrụ ndụ. Emere igwe anaghị agba nchara 304. Usoro ice-crushi ...
Akpa Akụrụngwa na-ezukọta na usoro ịdị ọcha nri, nke na-ekwe nkwa ice dị mma nri. Akpa Ice nwere nha dị iche dị, enwere ike ịhazi ya dịka ọmụmaatụ ndị ahịa. Enwere ike ibiputa ozi ahia site na logos di iche na akpa. Akpa uzo na-enweghị mbipụta bụ dị ọnụ ala.
Adress:China, Ọwụwa Anyanwụ Eshia